बिबिध Archives | Page 58 of 103 | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
दिनभरीको सुख शान्तिका लागि सुत्नु अघि यी ४ चिज सिरानीमुनि राख्नुहोस
शास्त्र भन्छ दिनभरी हुने सुख शान्तिको सम्बन्ध रातसँग हुन्छ । रातीमा राम्रो निद्रा परेन भने शरीरको थकान मेटिँदैन । तपाइँलाई ताजा अनुभव रातभरीको विश्राम पछि मात्र हुन्छ । दिनभरीको सुख शान्तिका... Read more
श्रीमान-श्रीमति संगै बसेर अवश्य पढ्नुहोस् !
एक दिन श्रीमान घर आउँदा निकै अबेर भएछ । अनी घर आएर ढोका बाट भित्र छिर्न न पाउदै श्रीमतिले भनिछन । कहाँ जानु भएको थियो ? मैले हजुरको अफिसमा पनि फोन गरी सोधे । हजुर त आज अफिस पनि हुनुहुन्थेन ।... Read more
फुर्सदको समयमा बेश्यावृति गर्छिन यी हिरोइन
एजेन्सी । सर्वियाकी रियालिटी टीभी स्टार २४ वर्षीय सेनाडा नुर्किकले फुर्सदको समयमा बेश्यावृति गर्ने गर्छिन् । यसको खुलासा उनले आफै गरेकी छिन् । आफू सुन्दर पुरुषसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने गरेको... Read more
महिला भेटिएको सूचना – सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ
काठमाडौँ । नयाँ बानेश्वरमा एक अधबैशे महिला भेटिएकी छिन् । नयाँबानेश्वर शंखमूल बिज्ञानमार्गमा बिहान देखि अलपत्र अबस्थामा अन्दाजी ५२ वर्षकी राम्रो सँग बोल्न नसक्ने अबस्थाकी एक महिला फेलापरेकी... Read more
रत्ननगर (चितवन) । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यान दिँदै जिल्लाका होटल, रेस्टुराँ तथा दोहोरी साँझ राति ८ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म बन्द गर्न सार्वजनिक अपिल गरेको छ... Read more
यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा धेरै तलब खाने १० कर्मचारी
वर्षेनि विश्वभर जागिरबाट सबैभन्दा धेरै तलब खानेहरुको सूची सार्वजनिक गदै आएको संस्था ‘ब्लुमबर्ग पे इन्डेक्स’ले सन् २०१६ को सूची सार्वजनिक गरेको छ । ब्लुमबर्गले सबैभन्दा धेरै तलब खाने १० जनाको... Read more
झुल दिनेलाई मात्र भोट दिन्छौँ : मुक्तकमैया
भीमदत्तनगर – दुई दशकपछिको स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्मुख बस्तीको मुहार फेर्नेदेखि सडक, यातायात, खानेपानी, स्कुल व्यवस्थापनको माग गरेका समाचार आइरहेका बेला कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१०... Read more
यति सम्म नालायक निर्वाचन आयोग : अहिलेसम्म उम्मेदवार सूचीसमेत वेबसाइटमा राख्न सकेको छैन
निर्वाचन आयोगले यसपालि नालायकीको हद पार गरेको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनको लागि मतदान हुने दिन नजिकिसक्यो। आइतबार हो मतदानको दिन। बिहीबार मध्यरातदेखि त प्रचार प्रसारसमेत बन्द गर्नुपर्ने भइसक्यो... Read more
सगरमाथा अञ्चल यातायात कार्यालयमा बम विस्फोट
सिरहा । सिरहाको लहानस्थित सगरमाथा अञ्चल यातायात कार्यालयमा बम विस्फोट भएको छ । यातायात कार्यालयको दोस्रो तलामा बिहीबार बम विस्फोट भएको जनाइएको छ । विस्फोटमा परेर केही सेवाग्राही र कार्यालयका... Read more
एउटै डोरीमा पासो लगाएर आमाछोराले गरे आत्महत्या
गुल्मी । छत्रकोट गाउँपालिका–२ पल्लीकोटमा गत शुक्रबार आमाछोरा एउटै डोरीमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे । साँझ पौने ६ बजे पल्लीकोटकी २० वर्षीया शीतल परियार र उनका दुई वर्षीय छोरा प्रवेश झुन्डिए... Read more